Basikety – «Amboaran’ny filoha 2018» : norombahin’ny MB2 All sy ny GNBC ny fandresena | NewsMada
Basikety – «Amboaran’ny filoha 2018» : norombahin’ny MB2 All sy ny GNBC ny fandresena
Tontosa, omaly tetsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina, ny fiadiana ny “Amboaran’ny filoha 2018”, taranja basikety. Nahazo izany Analamanga teo amin’ny vehivavy ary Vakinankaratra ho an’ny lehilahy.
Ny MB2 All Analamanga, teo amin’ny vehivavy, ary ny GNBC Vakinankaratra kosa, ho an’ny lehilahy. Ireo ny nandrombaka ny “Amboaran’ny filoha”, taranja basikety ho an’ny taona 2018. Fihaonana, nifarana tamin’ny fomba ofisialy, omaly alahady tetsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena, Mahamasina.
Mbola anjakan’ny ligin’Analamanga aloha hatreto ny sokajy vehivavy, eo amin’ity “Amboaran’ny filoha” ity. Taorian’ny Fandrefiala, izay nahazo izany, tamin’ny taon-dasa, lasan’ny MB2 All indray izany, tamin’ity. Resin’ny MB2 All, teo amin’ny famaranana, tamin’ny isa mazava, 62 no ho 49, ny SBBC Boeny. Niady ny fihaonan’ny roa tonta, teo amin’ny tapa-potoana roa voalohany, satria nifanaikaiky sy nifanenjehana hatrany ny isa, teny amin’ny solaitrabe.
Na izany aza, nitarika anisa hatrany ny MB2 All, notarihin-dry Miora sy i Lucia ary i Harisoa Christinah. Tetsy ankilany, saika niantehitra tamin’i Joce hatrany ny SBBC. Niainga tao aminy hatrany mantsy ny fanafihan’izy ireo. Hitan’ny mpanazatra ny MB2 All izany ka noraisina akaiky ny tovovavy, nanomboka teo amin’ny tapa-potoana fahatelo, izay nisintahan’ny MB2 All tsikelikely.
Nanao fahadisoana matetika i Joce, teo amin’ny tapa-potoana fahefatra, ka niafara tamin’ny fahazoany hadisoana dimy, izay nialany teny ambony kianja. Tsy nety intsony ny lalaon’ny SBBC, taorian’izay. Nitsitapitapy ny baolina matin’izy ireo raha nisesy kosa ny an’ny MB2 All.
Teo amin’ny lehilahy indray, efa tany amin’ny fanalavam-potoana vao nivoaka ho mpandresy ny GNBC Vakinankaratra, tamin’ny isa 98 no ho 92, ny Ascut Atsinanana. Vao teo amin’ny tapa-potoana faharoa dia efa nitarika anisa ry Elly sy ry Tsiory, nanoloana an-dry Lalason sy ry Olivier. Nisaraka tamin’ny isa mitovy, 77 no ho 77 anefa ny roa tonta, tao anatin’ny fe-potoana ara-dalàna.